I-China IECEE- CB Service and Testing | I-MCM
Siyini isitifiketi se-CB？
IECEE CB wuhlelo lokuqala lwangempela lwamazwe omhlaba lokuqashelwa kwemibiko yokuhlolwa kokuphepha kwemishini kagesi. I-NCB (National Certification Body) ifinyelela esivumelwaneni samazwe amaningi, esenza abakhiqizi bathole isitifiketi sikazwelonke kwamanye amazwe angamalungu ngaphansi kohlelo lwe-CB ngesisekelo sokudlulisa esinye sezitifiketi ze-NCB.
Isitifiketi se-CB yidokhumende elisemthethweni le-CB elikhishwe yi-NCB egunyaziwe, okufanele lazise enye i-NCB ukuthi amasampula womkhiqizo ahloliwe ahambisana nokwethulwa kwezidingo ezijwayelekile.
Njengohlobo lombiko ofanele, umbiko we-CB ubala izidingo ezifanele ezivela entweni ejwayelekile ye-IEC ngento ngayinye. Umbiko we-CB awunikeli ngemiphumela yakho konke ukuhlolwa okudingekayo, ukulinganisa, ukuqinisekisa, ukuhlolwa nokuhlola ngokucacile nangokungacaci, kepha kufaka nezithombe, umdwebo wesifunda, izithombe nencazelo yomkhiqizo. Ngokwesimiso sohlelo lwe-CB, umbiko we-CB ngeke usebenze kuze kube yilapho wethula nesitifiketi se-CB ndawonye.
HyKungani sidinga isitifiketi se-CB?
Ngqoly recognized noma approved by ilungu amazwe
Ngesitifiketi se-CB kanye nombiko wokuhlolwa we-CB, imikhiqizo yakho ingathunyelwa kwamanye amazwe ngqo.
Guqula uye kwamanye amazwe izitifiketi
Isitifiketi se-CB singaguqulelwa ngqo esitifiketini samazwe aso angamalungu, ngokunikeza isitifiketi se-CB, umbiko wokuhlola nombiko wokuhlolwa komehluko (lapho kusebenza khona) ngaphandle kokuphinda isivivinyo, esinganciphisa isikhathi sokuhola sesitifiketi.
Qinisekisa Ukuphepha Komkhiqizo
Ukuhlolwa kwesitifiketi se-CB kubheka ukusetshenziswa okufanele komkhiqizo nokuphepha okubonakalayo lapho kusetshenziswa kabi. Umkhiqizo oqinisekisiwe ufakazela ukugculiseka kwezidingo zokuphepha.
● Isiqu: I-MCM yi-CBTL yokuqala egunyaziwe yeziqu ezijwayelekile ze-IEC 62133 yi-TUV RH ezweni lase China.
● Ikhono lesitifiketi nokuhlola: I-MCM iphakathi kwesiqeshana sokuqala sokuhlola nokuqinisekiswa kwesithathu kwamazinga e-IEC62133, aqede ngaphezu kokuhlolwa kwebhethri okungama-7000 kwe-IEC62133 nemibiko ye-CB yamakhasimende omhlaba jikelele.
● Ukwesekwa kwezobuchwepheshe: I-MCM inabanjiniyela bezobuchwepheshe abangaphezu kwabangu-15 abakhethekile ekuhlolweni ngokwe-IEC 62133 ejwayelekile. I-MCM inikeza amaklayenti uhlobo olunzulu, olunembile, oluvaliwe lwe-technical support kanye nezinsizakalo ezihola phambili zolwazi.
Langaphambilini I-Taiwan- BSMI
Olandelayo: ENyakatho Melika- CTIA
Intengo Yesitifiketi se-Iecee
Inqubo Yesitifiketi se-Iecee
Isecee Certification Service
Isikhathi sokuhola se-Iecee
Imibhalo Yezobuchwepheshe ye-Iecee
Isidingo Sezobuchwepheshe se-Iecee
Izinto Zokuhlola Iecee
Indlela Yokuhlola ye-Iecee
Umbiko Wokuhlola we-Iecee
Ilebhu Yokuhlola Iecee
Intengo Yokuhlola ye-Iecee
Isecee Service Testing
Isikhathi sokuhlolwa kwe-Iecee
I -ceee Tr